Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana filoham-pirenena: Hirotsaka ho kandida ny Dr Jules Etienne
Fifidianana filoham-pirenena: Hirotsaka ho kandida ny Dr Jules Etienne
Mihazakazaka ny andro sy volana ary efa miha antomotra ny fanatanterahana ny fifidianana eto amintsika na dia mbola tsy voafaritra mazava aza ny daty hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin’ity taona 2018 ity.
Mihazakazaka manarak’izany ihany koa ireo kandida vonona hirotsaka ho filoham-pirenena haka ny toeran’ilay eny Iavoloha.
Omaly nandritra ny famaranana ny kongresin’ny Antoko MAFI (Madagasikara Fivoarana) teny amin’ny toeram-pandraisam-bahiny Panorama Andrainarivo no nanambara tamin’ny fomba ofisialy fa anisan’ireo hirotsaka kandida ho filoham-pirenena ny filohan’ny antoko MAFI dia ny dokotera Jules Etienne Rolland.
Ity farany moa dia efa nilatsaka nofidiana ho filoham-pirenena tamin’ny taona 2013 saingy noho tsy fahafenoan’ny fepetra dia voatsipaka teny anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ny maha kandida azy ka i Hery Rajaonarimampinina no nangatahiny ho solony.
Manana ny vinam-piaraha-monina hoentiny hampandroso an’i Madagasikara ny filohan’ny Antoko MAFI, ary hita ao anatin’io ny fampandraisana anjara ny fokonolona, tsy filohan’ny fokontany intsony fiantsoana azy fa filohan’ny fokonolona. Miainga eny amin’ny fokonolona ny fampandrosoana ary mendrika ampiana ara-bola izy ireo satria any ifotony no hiangan’ny fampandrosoana. “Raha lany filoham-pirenena ny tenako dia ampidiniko ny “budget” ampiasain’ny fiadidiana ny repoblika ary alefa mivantana any amin’ny filohan’ny fokonolona satria izy ireo no mahita ny maharary ny vahoaka any amin’ny tanàna misy azy tsirairay”hoy izy. Ankoatra izay dia manana ny vina hampidinana ny vidin’ny solika izay mampikaikaika ny maro ny filohan’ny antoko MAFI, dokotera Jules Etienne Rolland.